I-Tierra, ngu-Eloy Moreno: amandla okuloba, ubulula kunye nentsusa | Uncwadi lwangoku
Kwi-2020, umbhali waseSpain u-Eloy Moreno wazisa inoveli yakhe Umhlaba, ibali malunga nabantakwabo ababini kunye nesithembiso sikayise kubo. Isakhiwo sityhila umhlaba ogqithileyo ngasemva komabonwakude kunye nokuzonwabisa kwinkqubo ebonwa kwihlabathi liphela. Ekugqibeleni, umbhali usebenzisa ibali elinyanzelisayo ukubonisa ubudlelwane phakathi kwamabali amabini.
Abanye abagxeki boncwadi baqaqambise ubunyani bomxholo kunye neempawu zesitayile senoveli yale mihla. Kwaye ayisiyonto encinci, izinto ezinje ngomabonwakude okanye uthungelwano lwasentlalweni olwenziwayo kwisigqibo sophuhliso. Ngesi sizathu, Umhlaba imele indlela enobuchule yokusondela kumfundi kwimeko entsonkothileyo nokuphikisanayo.
1 Isishwankathelo seTierra, nguEloy Moreno
1.1 Ukudlala kuqale kwakhona
2.1 Incwadi malunga nexesha langoku lobuntu
2.2 Isicatshulwa esimnandi sokubonisa nzulu
3 Izimvo malunga nencwadi
4 Malunga nombhali, u-Eloy Moreno
4.2 Iincwadi zika-Eloy Moreno
Isishwankathelo se UmhlabaNguEloy Moreno
Indoda enamandla amakhulu kumzi-mveliso kamabonwakude nakwezolonwabo yenza isithembiso esinqabileyo kubantwana bayo ababini abancinci, UNelly noAlan. Ngokukodwa, isindululo kukuba ukuba aba bazalwana bagqiba umdlalo, utata wabo uya kuwuzalisekisa umnqweno abawuthanda kakhulu. Nangona kunjalo, umdlalo uphazanyisiwe: ngokuqhwanyaza kweliso iminyaka engamashumi amathathu, kwaye kunye neenguqu ezinkulu zenzeka kusapho.
Umhlaba (uHlelo B)
Ukudlala kuqale kwakhona
Ya Ebudaleni, uNelly ifumana ibhokisi engaqondakaliyo eneselfowuni, iringi kunye nesitshixo. Enkosi kwiselfowuni, uphinde wahlangana nomntakwabo (engakhange athethe naye) kwaye uya kuqhubeka umdlalo ongagqitywanga. Yile ndlela livela ngayo ithuba lokuba umlinganiswa ophambili azalisekise umnqweno wakhe, kuba uAlan wayesele ekufumene kudala.
Kwangelo xesha, umdlalo uza kunxibelelana ne inyaniso Inkqubo kamabonwakude enehlabathi liphela eliqwalasele ukukhula kwayo. Le nkqubo ijikeleze kubantu abasibhozo abahamba besuka eMhlabeni besiya kwiplanethi enguMars. Ngeli xesha, e-Iceland, uNelly kunye nomntakwabo bafunda ukuveza izinto eziphikisanayo ngemeko yabantu kwiplanethi esemngciphekweni.
Le ncwadi ayibalisi nje ibali elinxibelelene nabanye, kodwa nayo iphakamisa imeko yokubonakalisa rhoqo malunga nenyani yangoku. Kwangokunjalo, isitayile sebali esakhiwe kwizahluko ezifutshane ezinamabali atshintshanayo sonyusa umdla wabafundi malunga neziganeko eziza kwenzeka kwiphepha elilandelayo. Sebenzisa okungaphezulu kokufezekisiweyo injongo yakho gcina umbukeli ecaleni.
Ngokucacileyo, ukubheja kombhali kukwenza ukuba umfundi anandiphe ukunqongophala okuchazwe kumabali amabini aphakathi kwinoveli. Oko kukuthi, bobabini aba bazalwana babini abafumana isithembiso kwaye bakhule bodwa ngaphandle komnye nomnye, kunye nabathathi-nxaxheba kumdlalo kamabonakude. Ekugqibeleni, imvelaphi efanayo kubo bonke obo bomi iyafunyanwa kancinci kancinci.
Incwadi malunga nexesha langoku lobuntu
Ngokujonga kwayo okutsha kunye nokuhlaziyiweyo, Umhlaba Yincwadi enzima ukuyibeka phantsi emva kokuba uqalile ukuyifunda. Ukusuka kolu hlobo luhlaziyiweyo, U-Eloy Moreno uzama ukuveza umxholo ngeendlela zokunxibelelana ezaziwayo kuluntu kwinkulungwane ye-XXI. Kwicatshulwa, ugxininiso luwela kwimeko yomntu, lubonwa ukusuka kwixesha eliphawulwe ngoqhagamshelo.
Ukwengeza, izihloko ezininzi ezinzima zijongiswa ngokudibanisa -Yayiyintsusa, ngasendleleni- Isenzi esithe ngqo ngengxoxo ephandle. Izihloko eziphononongiweyo zivela kumonakalo wendalo owenziwe ngabantu kwiplanethi, nakwindlela yokuziphatha (ebonakalayo) ebekwe kunxibelelwano lwasentlalweni.
Isicatshulwa esimnandi sokubonisa nzulu
En Umhlaba, U-Eloy Moreno ubhengeza ingxelo ekwaziyo ukwenza uthethathethwano kunye nokuvusa uvelwano ngabafundi ngeendlela ezininzi zokuphuma kunye nokuphuma-kuyothusa, ubukhulu becala. Ngamnye kubo, ngaxa lithile, uba ngumcimbi obalulekileyo. Njengoko ufunda kwiphepha elingasemva lenoveli, ufuna ukufumana inyani, kodwa, "ingxaki yokukhangela inyani iyayifumana kwaye ayazi ukuba wenzeni ngayo."
Ngezi zizathu, kunjalo Incwadi ekumemayo ukuba ufumanise obona bomi babalinganiswa, kwaye, mhlawumbi ngethemba, umfundi ubonakalisa okwabo. Ngale ndlela Umhlaba ngu-Eloy Moreno uzama ukusondeza abafundi kwelona candelo linzima kwimeko yomntu.
Izimvo malunga nencwadi
Abagxeki bancoma ukubanakho kuka-Eloy Moreno wokubamba umdla womfundi, nangona isiseko senoveli siza kutyhilwa kungekudala. Amanye amazwi, kwelinye icala, athetha ngoethengwa elula ”, ngenxa yento ekucingelwa (ilula) yokwakhiwa kwencwadi. Nangeyiphi ndlela, lonke uvavanyo lwentsebenzo malunga Umhlaba ziyinyani: amandla okuloba, ubulula kunye nentsusa.
Malunga nombhali, u-Eloy Moreno
U-Eloy Moreno yinjineli yobuchwephesha kulawulo lwee-informatics ezelwe nge-12 kaJanuwari 1976 eCastelló de La Plana, ekuhlaleni eValencian, eSpain. Uphumelele kwiYunivesithi yaseJaume I kwidolophu yakowabo. Nangona waphumelela kancinci waqala ukusebenza kwicandelo lekhompyuter, ubomi bakhe bunikezelwe kuncwadi.
Kwi 2011, ukuthanda kwakhe kwamkhokelela ekubeni angene kwihlabathi leeleta kunye ukumiliselwa kwencwadi yakhe yokuqala (epapashwe ngokwakho), Ipeni eluhlaza yejeli. Lo mbhalo waba bt ngempumelelo yoncwadi, nto leyo yaququzelela ukusasazwa kweempapasho ezilandelayo. Ngokufanelekileyo, uninzi lokwamkelwa kwalo eluntwini kungenxa yendlela yokubhala yokubhala.
Emva koko upapasho lwe ukuqala kwakhe, kunye nolwamkelo olukhulu ngabafundi, Sebenzisa u-Moreno uthathe ukonyusa okukhulu. Ukusukela ngoko, umbhali waseSpain akayekanga umsebenzi wakhe wokubhala, ngakumbi amabali kunye neenoveli.
Ngakolunye uhlangothi, umbhali uye waduma -Ngaphandle kobukho bayo obomeleleyo kwimidiya yoluntu- kuba uyile iindlela zoncwadi. UMoreno, kabini okanye kathathu ngonyaka, wenza ukhenketho kubantu kwiindawo apho abeka khona iinoveli zakhe. Kunye noku, ufundisa iikhosi zoncwadi kunye noomasifundisane, kunye nokuthatha inxaxheba njengejaji kukhuphiswano loncwadi kwilizwe lakhe.
Iincwadi zika-Eloy Moreno
Emva koko Ipeni eluhlaza yejeli (2011), uEloy Moreno esidlangalaleni Into endiyifumene phantsi kwesofa (2013), enye impumelelo yokupapasha iguqulelwe kwiilwimi ezininzi. Emva kwexesha, umbhali waseCastellón ubuyile kupapasho lwe desktop ukuze apapashe Amabali aliqondayo ilizwe (2015), apho, yasungula inxenye yesibini neyesithathu, ngo-2016 nango-2018, ngokwahlukeneyo.
Ngeli xesha, uMoreno wapapasha inoveli yakhe yesithathu ngo-2015, Isipho, kananjalo kukhokelele kwimpumelelo kwangoko, ngaphandle kohlobo olunomda. Ngokufanayo, inoveli Ezingabonakaliyo (2018) ifumene amanani entengiso agqwesileyo. Ayilolize, ine-19 editions ukuza kuthi ga ngoku kunye neenguqulelo ezininzi. Okona kutsha ku-Eloy Moreno kunjalo Umhlaba (2020).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Tierra, ngo-Eloy Moreno
UArturo Sánchez Sanz. Udliwanondlebe nombhali weBelisarius: Magister militum yoBukhosi baseMpuma baseRoma